Mourinho oo shaaca ka qaaday ciyaartoygii ugu fiicnaa ee uu arkay… (Ma ahan Ronaldo iyo Messi!) – Gool FM
Dajiye October 12, 2019
(Yurub) 12 Okt 2019. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday xiddigii ugu fiicnaa uu abid ku arkay kubadda cagta noloshiisa oo dhan.
Jose Mourinho ayaa sheegay in halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo uu yahay xiddigii ugu fiicnaa uu ku arkay kubadda cagta noloshiisa oo dhan, isla markaana uu yahay kan ugu kartida badan.
Laakiin Mourinho ayaa qiray in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Cristiano Ronaldo iyo kan reer Argantina ee Lionel Messi ay labaduba yihiin kuwa ugu wanaagsan marka loo eego guulaha iyo xasiloonida qaab ciyaareedkooda.
Mourinho ayaa sheegay inuu nasiib u yeeshay in tababare uu u noqdo halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo markii uu ahaa caawiyaha macalinkii kooxda Barcelona ee Bobby Robson, isagoo xusay inuu hal xilli ciyaareed ku qaatay garoonka Camp Nou, isla markaana dhaliyay 47 gool.
Tababaraha reer Portugal ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Ronaldo waa ifafaale dhab ah, Cristiano iyo Messi waxay ciyaareen muddo dheer, waxeyna ahaayeen kuwa ugu sareeya muddo 15 sano ah”.
“Laakiin hadaan ka hadalno tayada, ma jirto cid ka sareysa halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo”.
“Markii aan caawiye ugu ahaa Bobby Robson kooxda Barcelona, waxaan ogaaday inuu yahay ciyaaryahan aan hore loo arag, dhaawacyada waxay dileen tayadiisa, waxay arrintaas noo diiday hal abuurnimadiisa la filayay inay sii dheeraato, laakiin kartida uu ku raaxeysanayay wiilkan 19 jirka ah waxay aheyd wax cajiib ah”.
“Man United aad ayey ugu deg degtay inay cayriso Mourinho” - Marouane Fellaini
Mesut Ozil oo ku dhaqaaqay Tallaabo muujinaysa inuu ka tagayo Kooxda Arsenal… (Muxuu sameeyey?)